Izithombe zeNASA zokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izithombe zeNASA zokushintsha kwesimo sezulu
Njengoba iplanethi ifudumala futhi nenani labantu landa, kuba lula kwiplanethi ukubona izinguquko ezenzekayo. Imililo ehambisana nesomiso esinamandla futhi esihlala isikhathi eside, amachibi nolwandle olomayo, izimo zezulu ezifana neziphepho noma izivunguvungu eziqhubeka zibhubhisa ...
Kepha izikhathi eziningi sicabanga ukuthi lawa ngamagama nje; lokho akudingeki ukuthi kusithinte. Kodwa-ke, ukucabanga ukuthi lokho akulungile, ngoba sonke sihlala emhlabeni owodwa, futhi sonke, kungekudala noma nini, sizobona imiphumela yokufudumala kwembulunga yonke endaweni yethu. Okwamanje, sikushiya ne- izithombe eziyisithupha ezithathwe yi-NASA ezibonisa iqiniso eligqamile.
2 I-Colorado (United States)
3 Ichibi Poopó, eBolivia
4 I-Aral Sea, i-Asia Ephakathi
5 ILake Powell, e-United States
Kulesi sithombe ungabona ukuthi indawo embozwe yiqhwa elincane, okungukuthi, lokubukeka kwamuva nje, lehlile lisuka ku-1.860.000km2 ngoSepthemba 1984, laya ku-110.000km2 ngoSepthemba 2016. Lolu hlobo lweqhwa lusengozini enkulu yokushisa komhlaba njengoba inciphile futhi incibilika kalula futhi ngokushesha okukhulu.
Endabeni ethile yaseGreenland, kuyinto ejwayelekile ukuthi njalo entwasahlobo noma ekuqaleni kwemifudlana yasehlobo, imifula namachibi kwakha ebusweni beqhwa. Kodwa-ke, ukuncibilika kweqhwa kwaqala ekuqaleni kuka-2016, okukhombisa ukuthi ukuncibilika kule ngxenye yomhlaba sekuqala ukuba yinkinga, futhi kubucayi.
I-Colorado (United States)
Kusukela ngo-1898, i-Arapaho Glacier eColorado yehle okungenani ngamamitha angama-40 ngokusho kososayensi.
Ichibi Poopó, eBolivia
ILake Poopó, eBolivia, ingelinye lamachibi axhashazwa kakhulu ngabantu, asebenzise amanzi alo ukunisela. Isomiso naso singenye yezinkinga zakhe, ngakho akazi noma uzokwazi yini ukusinda.
I-Aral Sea, i-Asia Ephakathi
I-Aral Sea, eyake yaba yisiziba sesine ngobukhulu emhlabeni, manje… ayisalutho. Indawo eyihlane lapho kwakukhona khona amanzi ayesetshenziselwa ukunisela ukotini nezinye izilimo.
ILake Powell, e-United States
Isomiso esishubile nesathatha isikhathi eside e-Arizona nase-Utah (United States), kanye nokuhoxa kwamanzi kudale ukwehla okukhulu ezingeni lamanzi aleli chibi. NgoMeyi 2014 leli chibi lalinamandla angama-42%.
Uma ufuna ukubona lezi nezinye izithombe, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izithombe » Izithombe zeNASA zokushintsha kwesimo sezulu
Yiluphi usuku olunemvula kunazo zonke evikini?
Izingadi zase-Ecuadorian zaseGorgia zisongelwa ukufudumala kwembulunga yonke